कोरोना र मे दिवसले नछोएका श्रमिक भन्छन्, ‘मजदुरको पेट भोकै होला भनेर कसले भन्ला ?'
राेजगार जीवनशैली समाचार
कोरोना र मे दिवसले नछोएका श्रमिक भन्छन्, ‘मजदुरको पेट भोकै होला भनेर कसले भन्ला ?' भोटका बेला मात्र मजदुर, अरु बेला मतलब गर्दैनन्
रमेश भारती काठमाडाैं, १९ वैशाख
आज १३१औं विश्व मजदुर दिवस । विश्वभरका मजदुरले यो दिन आफ्नो अधिकार प्राप्त गरेको दिनका रूपमा उत्सव मनाउने गरेका छन् । तर, कोरोना भाइरसका कारण दैनिकी गुजारा गर्ने समस्या भइरेको चाहबिल क्षेत्रकाे सडक निर्माणमा काम गर्दै आएका मोरङका दीपक चौधरीले भने मे दिवसका बारेमा थाहा आफूलाई थाहा नभएको बताए । कोरोना कारण देशभर लागू लकडाउनले उनलाई खासै असरसमेत गरेको छैन ।
चौधरीलाई आज त मे दिवस, तपाईंले मनाउनु भएन ? भन्ने प्रश्न गर्दा उनले जवाफ दिए, ‘एक दिन मे दिवस मनाएर के गर्नु ? भोलिदेखि कोदालो नचलाई घरमा चुलाे बल्दैन । छाक टार्न काम गर्नैपर्छ । कोरोना भन्दै घरमा बस्यो अनि मजदुर दिवस मनाउने भन्दै हिँड्न थाल्यो भने एक दिनको कमाइ हानि हुन्छ ।’
उनले भने, ‘बिहानै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले मजदुरले भोकै बस्नु पर्दैन भन्नुभएकाे छ । यहाँ आएर हेर्नुभएको भए थाहा हुन्थ्यो नि उहाँलाई हामी भोकै काम गरिरहेको देखेपछि । एकतिर कोरोना भाइरसका कारण काम पाइँदैन । अर्कोतिर परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता छ ।’ सरकारले मजदुरको होइन, मालिकका लागि मे दिवस मनाउने गरेको उनको आरोप छ ।
यसैगरी, नयाँ बानेश्वरस्थित बिजुलीबजार पुलअगाडि काम गर्ने श्रमिकको गुनासो पनि उस्तै छ । बिजुलीबजार सडकमा काम गरिरहेका श्याम अधिकारी मे दिवस र कोरोना भनेर घरमा बस्दा बेलुका के खानु र सर ? भन्दै गुनासो गर्छन् ।
‘बाटोमा काम गरेको पैसाले परिवार पालिएको छ । आजसम्म त बल छ, काम गरिरहेको छु । भोलि के हुन्छ, थाहा छैन । काम नगरी छाक टार्नै मुस्किल हुन्छ,’ उनले भने, कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्दा मजस्ता मजदुर मारमा परेका छन् । राम्रो खान नपाई काम गर्नुपर्छ । एकतिर खाना सकिएको छ भने अर्कोतिर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बाँच्नु त पर्छ । के गर्नु सर, काम नगरेर ?’
अधिकारीले मे दिवसले श्रमिकको हकहितका लागि काम नगर्ने बताउँदै उनले सधैँ मजदुरको बाध्यतालाई बुझ्ने गरी काम गर्न सुझाव दिए । मजदुरलाई चुनावका बेला सबैले हामी छौँ भन्छन् तर, त्यसपछि मतलब नगर्ने गरेको उनको गुनासो छ ।
विश्व अहिले कोरोना भाइरससँग लडिरहेको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न विश्वका धेरै देश लकडाउनमा छन् । श्रमिकलाई भने कोरोना भाइरसप्रति खासै चिन्ता छैन, कतिपय श्रमिक लकडाउनमा समेत काम गरिरहेका छन् । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवनयापन गर्ने कतिपय श्रमिकलाई यो दिवसका बारेमा खासै मतलब छैन भने कतिलाई थाहासमेत छैन ।
मे दिवसका दिन उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा भेटिएका धेरै मजदुर मे दिवस नमाउने र दिवसका बारेमा थाहा पनि नभएको बताउँछन् । सरकारले एकतिर हरेक मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने भन्दै मे दिवस मनाइरहेकाे छ भने अर्कोतिर कतिपय मजदुर भने मे दिवस कहाँ कसरी मनाइँदै छ भनेर अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् ।
यसैगरी, साँघुमा घर निर्माणमा काम गदै आएकी सानुमाया तामाङलाई मे दिवस भन्ने थाहा छैन । उनलाई चिन्ता परिवारको मात्र छ ।
निर्माण क्षेत्रमा काम गरिरहेकी सानुमायालाई पनि मे दिवसले छोएको छैन । उनी अरु दिनजस्तै आज पनि बिहानैदेखि काम नै गरिरहेकी छन् ।
‘कोरोना भाइरसका कारण घरमा बस्यो भने खानै पाइँदैन । सरकारले श्रमिकलाई राहत पनि दिएन । काम गरेर २ जना बच्चा पाल्दै छु,’ उनले भनिन्, ‘मैले निर्माण क्षेत्रमा काम गरेको ५ वर्ष भयो । अहिलेसम्म मे दिवस मनाएको छैन । हामीजस्ता काम गर्ने मजदुरले किन मनाउनुपर्‍याे मजदुर दिवस ।’
कोरोना भाइरसका कारण यो काम पनि गुम्यो भने भोकै बस्ने दिन आँउछ कि भन्ने सानुमायाको चिन्ता छ ।
मे दिवसमा विकसित देशले श्रमिकका सेवा सुविधा परिमार्जत र वृद्धि गर्ने गरेका छन् । तर, नेपालमा मे दिवस मनाइए पनि मजदुरका लागि त्यस्ता सेवा सुविधामा वास्ता हुँदैन । यो दिवस विगतदेखि नै श्रमिकमैत्रीभन्दा पनि राजनीतिक दल केन्द्रित हुने गरेको छ । जसका कारण वास्तविक मजदुर मे दिवस मनाउन उत्साहित देखिँदैनन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ३३ लाख श्रमिक आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीमा कार्यरत छन् । विभिन्न संघसंस्थाले देशभर निजी र सरकारी क्षेत्रमा ७५ लाखभन्दा बढी विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक छन् । उनीहरू सरकारले निर्धारण गरेको सेवा सुविधा नलिई आफनै ढंगले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । जसमा करिब २० लाखभन्दा धेरै ज्यालादरी मजदुरहरू रहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १९, २०७७, १५:१५:००
बजेटमा कृषिः २ खर्बका १४ नयाँ परियोजना